Facebook ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ သုံးကြမလဲ – Live the Dream
Facebook ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ သုံးကြမလဲ
ဆောင်းပါးများ ,ပညာရေး ,ဘဝ ,အလုပ်
ပြောပြပါအုန်း…….. စာဖတ်သူ လူငယ်တွေထဲမှာ အိမ်က အမေဆီက “နင်တို့ ဖုန်းပဲပွတ်နေတာပဲ” “အိမ်အလုပ်လေးလည်း ကူပါအုန်း” အဲလိုမျိုးတွေ တစ်နေ့ကို ဘယ်နခေါက်လောက် အပြောခံရဖူးလဲ? ဖုန်းကြည့် နေပြီဆိုရင် အများဆုံး ကတော့ ဂိမ်းဆော့နေတာ သို့မဟုတ် Facebook ပဲပေါ့။ အခုခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook မသုံးတဲ့သူ ဆိုတာ ရှိတော့ ရှိနိုင်ပေမဲ့ အင်မတန် ရှားသွား ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်ကို Facebook account တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုမကသော account တွေနဲ့ လူကြီး လူငယ်မရွေး အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် စတင် မိတ်ဖွဲ့ကြ ခင်မင်ကြ ပြီဆိုရင်တောင် အရင်ခေတ်ကလို ဖုန်းနံပတ်တွေ တောင်းတာထက် Facebook account ကိုပဲ ဖလှယ်တတ်ကြတာ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။
တခြား social media platform တွေ ဘယ်လိုပဲ များများ Facebook ကိုတော့ အခုချိန်ထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနေကြတုန်းပါပဲ။ ၂၁ရာစုမှာ Facebook ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး နေရာယူထား လျက်ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ အနည်းဆုံး တစ်နာရီကနေ တစ်ခါတစ်လေ ၁၀နာရီလောက်ထိ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို Facebook ပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းမိကြပါတယ်။ အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ကတော့ အမြဲ ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ Facebook ဆိုတာလည်း သုံးတတ်တဲ့သူ အတွက်တော့ အရမ်းအကျိုးရှိတာမို့ နည်းလမ်းမှားယွင်းစွာ အသုံးမပြုမိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook ကို သုံးကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအကျိုး ရှိရှိလေး သုံးလို့ ရကြောင်း နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးသွားပါမယ်နော်။
၁။ Friend list ကို ရှင်းပါ
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook newsfeed မှာ အများဆုံး တက်တာကတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ တင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေပဲ တက်တာများပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook friend တွေထဲမှာ ဘယ်သူအတွက် မှ အကျိုးမရှိတဲ့ ပေါက်ကရ တွေပဲ တင်လေ့ share လေ့ ရှိတတ်တဲ့ သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲလို Facebook friend တွေကို အနည်းဆုံးတော့ unfollow လုပ်လိုက်ပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အကျင့်တစ်ခုလို အမြဲ ကြည့်ဖြစ် သုံးဖြစ် နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲက Facebook စာမျက်နှာ မှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာ တွေတက်နေလဲ၊ ဘယ်လို သတင်း အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ရဲ့ ခေါင်းထဲ ထည့်ထားမိလဲဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဖျော်ဖြေမှု သပ်သပ်အတွက် ကြည့်တာ အပျော် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လောက်က ကိစ္စမရှိပေမဲ့ နေ့ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ရေတွေ များလာမယ်ဆိုရင် ရေရှည် မိမိရဲ့ ဦးနှောက် မှတ်ဉာဏ် ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမဝင် တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကိုပဲ ကြည့်ပါများလာရင် ပညာရပ်တွေကို အမှန်တစ်ကယ် လေ့လာဆည်းပူးတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ လေ့လာမှတ်သား နိုင်စွမ်းက လျော့ကျ သွားနိုင်ကြောင်း သုတေသန တွေကလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို ဘယ်သူအတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ ပေါက်တတ်ကရ တွေပဲ ဝေမျှနေတတ်သူဟာ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေမလား ဆိုတာ ဆန်းစစ် ကြည့်လိုက်ပါအုန်းနော်။
ဒီလိုဆိုလို့လည်း Facebook မှာ မပျော်ရတော့ဘူး ဆိုလားတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook မှာ ပျော်စရာ ဟာသတွေလည်း အများကြီး ရှိတာမို့ ရယ်ရင်းမောရင်း လည်း Facebook ကို ပျော်ပျော်ကြီး သုံး နေကြသလို ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း သုံးလို့ ရပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုးက Facebook ကို ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး နဲ့ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့၊ အလုပ် တွက် လိုအပ်လို့ ဒါမှမဟုတ် အပျင်းပြေဖို့ရုံ လောက် သုံးတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို ထွေထွေထူးထူး ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲ သုံးကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေး ဆိုသလိုပါပဲ။ အကျိုးရှိရှိနဲ့ နည်းလမ်းမှန်ဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Facebook ကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မသုံးမိလို့ အဆုံးသတ်မလှတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ရေသောက်ဖို့ မေ့ကောင်းမေ့မယ်၊ Facebook ဖွင့်ကြည့် ဖို့တော့ အမြဲ သတိရတတ်တာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Facebook မှာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိနိုင်မဲ့ အရာ တစ်ခုခုလောက်တော့ ကျန်နေခဲ့ဖို့ တော့လိုတာပေါ့။
၃။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်သို့ ချဉ်းကပ်ပါ
အခု နောက်ပိုင်းမှာ နယ်ပယ် အသီးသီးက အတွေ့အကြုံရင့် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် တော်တော်များများ က Facebook မှာ ဗဟုသုတ ဝေမျှတာတွေ သူတို့ အမြင်အသီးသီးတွေကို ဆွေးနွေးလာ တာမျိုးတွေ အများကြီး ပေါ်ထွန်းလာပါပြီ။ တစ်ချို့တွေဟာ Facebook page နဲ့ account အပြင် နယ်ပယ်အလိုက် Facebook group လေးတွေကနေလည်း မျှဝေပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ တွက် အင်မတန် မှ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ပါ။ Google တို့ အခြား social media တွေမှာ သွားရောက်လေ့လာ နိုင်ပေမဲ့လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားက တင်တာတွေပဲ ရှိလေ့များတာမို့ ဘာသာစကား အခက်အခဲ အပြင် နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု မတူညီတာတွေ ကွဲပြားတဲ့ ဓလေ့တွေနဲ့မို့ ရာနှုန်းပြည့် ကိုယ့်အတွက် ကိုက်ညီဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ်က Marketing နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ search မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံ နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ post တွေ video တွေ အများကြီး ကျလာမှာပါ။ ကိုယ်က Engineering ကျောင်းတက်နေတဲ့သူ ဆိုရင်လည်း အင်ဂျင်နီယာ တွေ ရှိတဲ့ group တွေထဲ ဝင်ထားလိုက်မယ် ဆိုရင် နယ်ပယ်ထဲမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နေသူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တွက် လည်း ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာရပ် သို့မဟုတ် ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ပြောဆိုနေကြတဲ့ Facebook group တွေ professionals တွေ ရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း တွေကို ချဉ်းကပ် ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်အကြောင်းပြောတဲ့ ကိုယ့် account
အစပိုင်းမှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စတင် ရင်းနှီးရင်တောင် Facebook account ကို ဖလှယ်ကြတာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ဟာ တစ်ဖက်လူရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် First impression ဖြစ်လာပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ Facebook မှာ friend စ ဖြစ်ပြီဆို account ကို ဝင်မကြည့်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ နော်။ ဒါကို ကိုယ်က ကိုယ့် timeline မှာ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက တစ်ဖက်လူ ကိုယ့်အပေါ် မြင်နိုင်တဲ့ အမြင်အပေါ် အနည်းနဲ့ အများတော့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ အလုပ်တွေမှာဆို Facebook ကနေပဲ အလုပ်ခေါ်တာတွေ ရှိလာတာမို့ ကိုယ့်ကို အလုပ်ခန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို ခဏလောက်တော့ ဝင်ကြည့်နိုင်လောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook က ပုံတွေ အကြောင်းအရာ တွေက professional ကျနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနေရာမှာတော့ တစ်ချို့လူတွေက Facebook ကို အပျော်သုံးတာမျိုးလည်း ရှိနိင်တာမို့ အမြင် ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
အခက်ခဲဆုံး နဲ့ အလိုအပ်ဆုံးပါပဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ Facebook ပေါ်မှာပဲ အချိန်တွေ ကုန်နေတဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ချင်ပေမဲ့ ခက်ခဲ လွန်းလှပါတယ်။ ခဏလေးပဲ သုံးမယ်၊ ဒီ ဗီဒီယို လေး ကြည့်ပြီးရင် တော်ပါပြီ ဆိုပြီး ၂နာရီလောက် ကုန်သွားတာ ၃နာရီလောက် ဖြစ်သွားတာလည်း အကြိမ်ရေ မနည်းတော့ပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Facebook သုံးချိန်ကို အချိန်လေးတစ်ခု ကန့်သတ်လိုက်ပါ။ တစ်ခါထဲ အများကြီး လျှော့ချလိုက်တာထက် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀လောက်စီပဲ ဖြစ်ဖြစ် လျှော့ချလိုက်ရင် အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၁နာရီလောက်ပဲ သုံးမယ်လို့ ဖုန်းထဲမှာ နောက် ၁နာရီမှာ alarm လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒီထက်ပို ထိရောက်ချင်ရင် ဖုန်းထဲမှာ ဒေတာ နည်းနည်းလေးပဲ ဝယ်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ Bill မြန်မြန် ကုန်သွားလို့ Facebook မသုံး ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် အမေ့ဆီက “ဖုန်းပဲပွတ်နေတာပဲ” ဆိုတဲ့ အသံလေး မကြားရတော့ဘူးဆိုတော့ အမေနဲ့လည်း ပိစ့် ပဲပေါ့…. ဟဲ ဟဲ